Antoka mandritra ny 50 taona: hatao « béton » ny lalan-dratsy amin’ny RN 5 | NewsMada
Antoka mandritra ny 50 taona: hatao « béton » ny lalan-dratsy amin’ny RN 5
Lalana mateza ho an’ny taranaka no ilaina. Sambany eto amintsika nisian’ny fifanarahana hiantohan’ny orinasa manao ny asa mandritra ny 50 taona, toy ny fanarenana ny lalana mampitohy an’i Toamasina, mandalo any Foulpointe hatrany Soanierana Ivongo.
Nijery ny fizotry ny asa fanarenana ny lalam-pirenena fahadimy (RN 5), miainga eo Toamasina hatrany Soanierana Ivongo, ny filoha Rajoelina Andry, ny faran’ny herinandro teo. Nampikaikaika ny rehetra tokoa ity lalana ity satria tsy nateza mihitsy na teo aza ny fanarenana azy nandritra ny taona maro. Notsorin’ny filoha fa mila fotodrafitrasa manara-penitra ka hampiavaka ny asa atao izao ny hanaovana simenitra milaro vato sy vy (béton armé) ny lalana tena ratsy, miainga eto Toamasina hatrany Soanierana Ivongo. Mampiavaka azy koa ny hiantohan’ilay orinasa malagasy manao azy mandritra ny 50 taona. Izany hoe, ao anatin’izany ny hikojakojana azy sy ny hanamboarana raha sendra misy ny simba.
Ankoatra izany, nojeren’ny filoha Rajoelina koa ny tany malalaka eny Ambohijafy, hanorenana ny tranobe “Building mora” any Toamasina. Manampy ireo, nihaona tamin’ny teknisianina ny tenany mikasika ny fivoaran’ny asa amin’ny fanamboarana ny arabe “voie rapide” mirefy 10 km, mampifandray ny seranan-tsambon’i Toamasina sy ny lalam-pirenena faharoa (RN 2). Vinaivinaina ho vita amin’ny faran’ny taona 2020 ity lalana ity.
Tafiditra ao anatin’ny asam-pampandrosoana araka izay voasoritra ao amin’ny “velirano” nataon’ny filoha avokoa ireo.
Nitety toerana maro hafa koa ny filoha Rajoelina, nandritra ny roa andro nandalovany taty Toamasina. Notokanany ny biraon’ny zandarimaria ao amin’ny seranan-tsambo ho an’ny ranomamy (port fluvial). Nanolotra fitaovana milina lehibe fibatana entana hampidirina na havoaka amin’ny sambo koa ny filoha ho an’ny orinasa SMMC. Hanatsarana ny fomba fiasa sady hanatrarana ny fampandrosoana avokoa ireo natao rehetra ireo.